I-Samsung Galaxy Watch Active: Imininingwane, Intengo kanye Nokukhishwa | Izindaba zamagajethi
Le iwashi elihlakaniphile le-Samsung Galaxy Watch Active
U-Eder Esteban | | Gadgets, SmartWatch
Umcimbi we-Samsung Unpacked uzinikeza okuningi. Ngaphezu kokwethula izingcingo zayo ezintsha ezisezingeni eliphezulu, i-Galaxy S10 ne-Galaxy Fold isengamele, inkampani yaseKorea isishiya nochungechunge lwemikhiqizo eyengeziwe. Sinezinye zazo zokugqoka ezitholakalayo. Ukuba umkhiqizo obaluleke kakhulu kulo mqondo i-Galaxy Watch Active, i-smartwatch esisha sha.
Ekuqaleni kwale nyanga vele kube nokuvuza okuthile ngale Galaxy Watch Active Okomkhiqizo. Ngakho-ke besivele singathola umbono wokuthi yini esingayilindela kule smartwatch entsha evela enkampanini. Ekugcineni, kulo mcimbi sikwazile ukwazi konke mayelana nale divayisi entsha. Iwashi elenzelwe ezemidlalo.
Izinyanga kwathiwa abakwaSamsung basebenza ngewatchwatch entsha, okuzongenwa ngayo esikhundleni seGear Sport. Kubukeka sengathi le Galaxy Watch Active ikhethwe njengeyongena esikhundleni sakho. Iwashi lapho umkhiqizo wethula ngalo ushintsho olubalulekile, kokubili ekwakhiweni nasekucacisweni kwalo. Kepha lokho kuthembisa ukuletha injabulo enkulu enkampanini. Ulungele ukuhlangabezana naleli washi elisha?
1 Imininingwane Samsung Galaxy Watch Iyasebenza
2 Isamsung ivuselela uhla lwayo lwe-smartwatch ngeGlass Watch Active
3 Intengo nokutholakala
Imininingwane Samsung Galaxy Watch Iyasebenza
I-Samsung ingenye ye- imikhiqizo ephezulu engxenyeni yokugqokekayo. Ngalesi sizathu, ukuvuselelwa kwaleli banga kuyinto ebaluleke kakhulu ekuqhubekeni kwalo emakethe yomhlaba wonke. Sithola uchungechunge lwezinguquko kuleli washi, uma kuqhathaniswa namamodeli wangaphambilini. Lokhu ukucaciswa kwayo okugcwele:
Ukucaciswa kobuchwepheshe i-Samsung Galaxy Watch Active
I-Modelo I-Galaxy Watch isebenza
Isistimu yokusebenza Tizen OS
Isikrini Amasentimitha angu-1.1 ngesisombululo se-pixel esingu-350 × 360 ngeGorilla Glass
Umseshi I-Exynos 9110 (amakholi amabili we-1.15GHz)
Isitoreji sangaphakathi 4 GB
Conectividad I-4G / LTE i-Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11n NFC A-GPS
Ezinye izici Ukumelana NFC Water 5 ATM + IP68 KANYE MIL-STD-810G
Ibhetri 230 mah
Ubukhulu 39.5 × 39.5 × 10.5mm (40mm)
Isisindo I-25 amagremu
Ukuhambisana I-Android 5.0 noma ngaphezulu noma i-iOS 9.0 noma ngaphezulu
AbakwaSamsung bakuqinisekisile lokho iwashi labo elilula kakhulu okwamanje. Inesisindo esingamagremu angama-23 nje, njengoba ubona. Imodeli eyenzelwe ngqo ezemidlalo. Kungakho ifaka endaweni yemvelo iGear Sport. Yize kulokhu sithola uchungechunge lwezinguquko ezibalulekile. Ukuzalwa kobubanzi obusha obuvela enkampanini yaseKorea.
Isamsung ivuselela uhla lwayo lwe-smartwatch ngeGlass Watch Active
Inkampani yaseKorea iphakamise ukuvuselela ngokuphelele yonke imikhakha yemikhiqizo yayo, kufaka phakathi okugqokekayo. Ngakho-ke, sithola iwashi elisha abasebenzisi abazolithanda kakhulu. Okunye ukucaciswa kwayo bekudalulwe ngaphambi kokwethulwa kwayo. Ngakho-ke besivele sazi ukuthi yini esingayilindela kule divayisi.
AbakwaSamsung bayethula njengesibonelo esingasindi, esisebenziseka kalula futhi esikahle kakhulu. Idizayini yenziwe lula kule Galaxy Watch Active. Inkampani yaseKorea isuse i-bezel ejikelezayo kule divayisi, okushintshe kakhulu ukubukeka kwayo. Ine-touch screen nezinkinobho ezimbili eziseceleni, ongazisebenzisa ngazo i-interface. Qhubeka usebenzise iTizen njengohlelo olusebenzayo. Yize i-interface iguqulwe kancane kuleli cala. Njengoba inezici ezithile ze-UI eyodwa.
Uhlelo lokusebenza olumaphakathi luhlanganiswe newashi lokuqapha ukusebenza komzimba. Inemodi ethola ngokushesha ukuthi umsebenzisi uyavivinya yini. Ngaphezu kwalokho, kusho ukuthi ukuvivinya umzimba kuhlolwe ngezinkomba ezinemibala, ukuze kube lula ukuqonda imininingwane eshiwo. Siphinde sibe nomqaphi womfutho wegazi kuwo, njengoba kuqinisekiswa yinkampani yaseKorea kuleso sethulo. Ngaphezu kwenzwa yokuthola ukucindezeleka komsebenzisi. Kuphelele ngokuphelele ngalo mqondo.
Ngaphandle kwalokhu, le Samsung Galaxy Watch Active ibuye ihlanganise isikrini se-AMOLED, inzwa yokushaya kwenhliziyo kanye ikuvumela ukuba urekhode kuze kube yizinhlobo ezi-6 zemisebenzi ehlukene yomzimba. Singaba futhi nerekhodi lokulala komsebenzisi. Ngakho-ke ungaba nokulawula kulokhu. Ngenxa yewashi, kuzokwazi ukulandela ngomkhondo isimo somzimba nempilo yomsebenzisi. Yindlela abakwaSamsung abafuna ukuyinikeza ngayo.
Ngokuqondene nayo yonke imininingwane, iza nokumelana kwamanzi kwe-5ATM (50 metres deep) kanye nesitifiketi se-IP68, ukumelana namanzi nothuli. Ngakolunye uhlangothi, kuyamangaza lokho ithole isitifiketi sempi se-MIL-STD-810G. Okungangabazeki okwenza kucace ukuthi sibhekene newashi elimelana kakhulu. Njengoba bekulindelwe i-Bixby ihlanganiswe nedivayisi. Ngakho-ke sizokwazi ukuthola izikhumbuzo kumsizi. Kuzosikhumbuza ukuthi sekuyisikhathi sokuphuza amanzi noma ukuvuka njalo ngemizuzu embalwa.
Lapho nje Ukucaciswa okugcwele kwale Galaxy Watch Active, yisikhathi sokwazi okwengeziwe ngentengo nosuku lokukhishwa kwale smartwatch entsha ye-Samsung. Umkhiqizo awukaze waziwa ngokuba ngenye yezishibhile kakhulu kulesi sigaba. Ngabe lokhu sekuguqukile ngale smartwatch entsha?
Mayelana nosuku lokukhishwa futhi sinedatha ngakho. AbakwaSamsung bakuqinisekisile ukuthi bazokwethulwa ezitolo kusukela ngoMashi 8, nokuwusuku olufanayo lapho uhla oluphelele lwama-smartphones abo luzofika khona. Ngakho-ke kuzoba usuku olugcwele ukukhishwa yinkampani yaseKorea.
IGalaxy Watch Active izokwethulwa ngemibala eminingi. Kuze kube manje, imibala eqinisekisiwe yilena: Isiliva, omnyama, igolide rose, oluhlaza okolwandle. Yize ingalandwanga kuningi. Ngaphezu kwalokho, umucu wayo ongu-20 mm uyashintsha. Ngakho-ke abasebenzisi bangakhetha uhlobo olubathandayo kakhulu ngaso sonke isikhathi.
Mayelana nentengo lewashi elihlakaniphile yomkhiqizo waseKorea ngeke ibe nedatha okwamanje. Kuyinto esinethemba lokuyizwa maduzane, ngakho-ke sizozinaka izindaba mayelana nale divayisi. Kufanele sazi maduzane
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » Le iwashi elihlakaniphile le-Samsung Galaxy Watch Active
Le yi-Galaxy Fold, i-smartphone yokusonga yakwa-Samsung